Shankalay Image: ချစ်သူများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ချစ်သူရဲ့ အကြောင်းကို ဝေဖန်ခြင်း
ချစ်သူများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ချစ်သူရဲ့ အကြေ...
ချစ်သူများနေ့ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် ချစ်သူရဲ့ အကြောင်းကို ဝေဖန်ခြင်း
Published : 2:50:00 PM Author : ရှမ်းကလေး
ချစ်သူဆိုတာ ချစ်သူနှစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခင်မြတ်နိုး ကြလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည့်ပါရစေ ပရိတ်သပ်တို့ရေ။ ဒါမှလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူယောကျာင်္လေးက သူသိပ်ချစ် ပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို ဟာ.. ဒါငါသိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဆိုပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့် ပြောနိုင်မှာပေါ့။ ထိုနည်းတူစွာပဲ ဟိုဘက်က အချစ်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးကလည်း သူ့ကိုချစ်တဲ့ ယောက်ကျားလေးက နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်ပါမှ သူငယ်ချင်းတွေ ရှေ့မှာကော မိဘဆွေမျိူး တွေရှေ့မှာကော ဒါသူ့ချစ်သူ ရည်းစားပါဆိုပြီး ရဲဝင့်စွာ အသိပေးရဲမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ချစ်သူဆိုတာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နှစ်နှစ်ကာကာ ရင်ထဲကရော နှလုံးသားထဲကပါ ချစ်ကြပါမှ ချစ်သူဆိုတဲ့ စကားလုံး (၂)လုံးလေးကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်မိပါတယ်။ တကယ်လို့ ချစ်သူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးက ချစ်သူရည်းစား ဘ၀မှာ နှစ်နှစ်ကာကာ မချစ်မိကြရင် လင်မယား ဘ၀ရောက်တော့ ချစ်သူရည်းစား ဘ၀က တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြင်ကြင်နာနာ မြတ်မြတ်နိုးနိုး မချစ်ကြခဲ့တဲ့ အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်မြင်တွေ လွဲမှားတာတွေ ရှိတတ်လာကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မလိုမုန်းစိတ် ထားတွေထားပြီး လင်ယောကျာင်္း ဖြစ်သူက သူရဲ့မိန်းမဖြစ်သူကို မိုချိူးမျစ်ချိူးနဲ့ “မင်းကိုချစ်လွန်းလို့ ယူခဲ့တယ်များ မှတ်နေလား၊ မင်လင်မရမှာ ကြောက်လို့ ယူခဲ့တာ နားလည်လား” ဆိုပြီး ပြောဆိုတတ် ကြပါတယ်။ ဟောမိန်းကလေး ဘက်ကလည်း ဒါမျိူးဆို ဘယ်အပြောခံ လိမ့်မလဲ။ “ရှင့်ကိုရော ကျမက ကြိုက်လွန်းလို့၊ ချစ်လွန်းလို့များ ယူခဲ့တယ်များ ထင်နေလား၊ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျမရုပ်ရည်နဲ့ ရှင့်ထက်သာတဲ့ လင်အယောက် (၁၀၀)လောက် ယူလို့ရတယ် နားလည်လား”ဆိုပြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ လေးဖြူတို့ ပြိုင်တူဟစ်မယ့် ပွဲမျိူး ရောက်လာ ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ မိသားစု တစ်စုဟာ ပြိုကွဲသွားတော့မပေါ့ဗျာ။ ကလေးတွေ ရှိနေကြတဲ့ မိသားစုဆိုရင် တရားခံကတော့ ကလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ စကားပုံလိုမျိူး အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုသလို... ချစ်သူရည်းစား ဘ၀မှာကတည်းက တဦးနဲ့တဦး နှစ်နှစ်ကာကာ၊ ကြင်ကြင်နာနာ၊ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ခဲ့ကြပါမှ လင်နဲ့မယား ဘ၀မှာ ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်လေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိပါတယ်။ အဓိကကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်းစိတ် ရှိဖို့တော့ လိုတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က မိန်းကလေးတွေကို မိုလိုပေါက်အောင် ယူထား လို့၊ သိလို့၊ တတ်လို့ ရေးနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မိန်းမမပြောနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ချစ်ရမဲ့သူတောင် မရှာတွေ့သေးဘူး။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ဖြတ်သန်း ခဲ့သမျှ၊ ကျွန်တော် တွေ့ကြုံခဲ့သမျှ အိမ်ထောင် စုလေးတွေ၊ ချစ်သူရည်းစား စုံတွဲလေးတွေကို ကြည့်ပြီး၊ ကျွန်တော် သိသလောက် ဝေဖန်ထားတာပါ၊ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တစ်ခု မကြိုက် တာက ချက်တင် (chat Room) ပေါ်မှာ ရည်းစားတွေ၊ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတာ။ သူများကို မနာလိုတာတော့ မဟုတ်ပါ ဘူးဗျာ။ ဘာတွေလဲတော့ မသိဘူး။ ချက်တင်ကြောင့် တရုတ်မှာဆိုရင် မိန်းမပျိူလေးတွေဟာ ယောက်ကျားလေးတွေနဲ့ ချိန်းပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံကြတယ်လို့ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် အသက် (၃၂)နှစ်အရွယ် HIV(+) ဝေဒနာရှင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဖြစ်သူ Mr. Christer Merrill Aggett သည် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အမျိုးသမီး (၁၆) ဦးနှင့် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ရာ မိန်းကလေး နှစ်ဦးတွင် ၎င်းထံမှ HIV(+) ပိုးကူးစက်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအမျိုးသမီး များသည် အသက်(၁၂)မှ (၁၄)နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်များ ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် Chat Room များမှတစ်ဆင့် Mr.Aggettနှင့် ရင်းနှီးသိကျွမ်း ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Mr.Aggettအား ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၁၄)နှစ်အပြင် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခံရသူ မိန်းကလေး (၁၆)ဦးအတွက် နစ်နာကြေး Kronor (၂.၇) သန်း၊ (ဒေါ်လာ ၄၂၅၀၀၀) ပေးဆောင်ရန် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်တဲ့။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ တခြားနိုင်ငံ၊ တခြားဒေသတွေ အတွက်တော့ သိပ်ပြီးတော့ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ အမျိူးသမီးတွေ အတွက်တော့ အလွန်ကိုမှ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တဲ့ အပြုအမူ တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ဆိုရင်လည်း ချက်တင် (chattting) မတက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယေက် ဆိုတာကတော့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေဟာ မိန်းကလေး တွေလည်းရှိမယ်။ ယောကျာင်္လေး တွေလည်း ရှိမှာပဲ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေအတွက် သိပ်ပြီးတော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို လူမမြင် စကားသံ မကြားပဲ ချစ်တယ်လို့ လက်ကရိုက်ယုံနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ မလုံလောက်သေးဘူး လို့တော့ ထင်မြင်ယူဆ မိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ ချက်တင်တွေ တက်ဖြစ်တာပဲ။ နေ့တိုင်းကြီးတော့လည်း ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။ ဟော.. သူတို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင်ပဲ လှမ်းနှုတ်ဆက် လိုက်တယ်။ နေကောင်းလား ဘာလား..၊ ညာလား၊ ဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်၊ ဟောပြီးတော့ သူတို့ရီရအောင် လို့ဆိုပြီး ဟာသလေးတွေ အရွင်းဖောက်ပြီး ပြောပေးလိုက်တယ်။ ပြီးရင်လုပ်စရာ ရှိတာတွေ ဆက်လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးရင်တော အိမ်ပြန်ချိန် ညနေစောင်း တစ်ခါရောက်ပြန်ရင် နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားတယ်။ ချက်တင်တက်တဲ့ အချိန်မှာ လူတစ်ဖက် သား နစ်နာစေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော် ဘယ်သောအခါမှ မပြောမိခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ပြောလို့ရတာ ပဲဗျာ။ ကိုမင်းကို မိုးလောက်ကြီးချစ်ပါတယ်။ တိမ်လောက်ကြီး ချစ်ပါတယ်။ ကိုမင်းရဲ့ အချစ်ပြန်မရရင် ဒီညတော့ မအိပ်တော့ ဘူးကွာလို့၊ ဒါနဲ့ ဟိုဘက်က မိန်းကလေးကလည်း သနားစိတ်တွေ ၀င်သွားပြီး သူ့ကိုလည်း ဘယ်သူ့မှ မကြိုက်မှန်း သိတော့ လတ်တလော အချစ်ကို လက်ခံလိုက်တယ်။ (မ်ိန်းကလေး အားလုံးကို ပြောခြင်းမဟုတ်)။ ဒါနဲ့ပဲ ဟိုဘက်က ကောင်က ၀မ်းတွေတာ၊ မိန်းကလေးကြိုက်မဲ့ စကားတွေကို ပြော။ ပြီးရင် နေရပ်လိပ်စာကိုမေး။ ဟော ချိန်းတွေ့ကျ။ ယောက်ကျားလေးကု သူလုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်ပြောင်း။ တယောက်ထပ်ရှာ၊ တယောက်ပြောင်းနဲ့၊ ဒါကြောင့် လောကကြီးမှာ AIDS/HIV ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နေတာ သိပ်ပြီးတော့ မဆန်းပါဘူး။(လူတွေအားလုံး ပြောခြင်းမဟုတ်) ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုမျိူး လုပ်ရပ်တွေကို ပြုမူဖို့ ဘယ်သောအခါမှ မစဉ်းစားမိလေဘာ။ ခုလောလောဆယ် ကျွန်တော် ချစ်ရမယ့် သူတောင် ရှာလို့ မတွေ့သေး။ ရှာလို့မတွေ့တာထက် မရှာနိုင်သေးဘူး လို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်လို့တော့ ထင်လို့ရပါတယ်။ အခုကျွန်တော် မိသားစုကို တည်ထောင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားမရှိသေး ဘူးလေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးနှောက်က ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းသတိ ပေးနေတယ် သိလားဗျ။ “ဟေ့ကောင် ရှမ်းကလေး အခုချိန်မှာ မင်းမွေးမေမေနဲ့ ကျွေးဖေဖေတောင် ကျေးဇူး မဆပ်နိုင်သေးဘူး.. မင်းနဲ့ မဆိုင်သေးတဲ့ နောက်တစ်ယောက် ကိုတော့ မစဉ်းစားလေနဲ့တဲ့။” ယောက်ကျား တစ်ယောက်ဆိုတာ သူ့ရဲ့မိသားစုကို လုပ်ကျွေး နိုင်မှပေါ့ဗျာ။ ဒါမှလည်း သူ့ကိုချစ်မဲ့ မိန်းကလေးကလည်း သူ့ကို သူ့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစား အဖြစ် လက်ခံနိုင်မှာပေါ့။ ကိုယ့်မိသားစု ကိုလည်း လုပ်ကျွေးနိုင်မှ ကိုယ့်မိသားစုကို မလုပ်ကျွေးနိုင်သေးပဲ သူများမိသားစုကို သွားပြီးတော့ မလုပ်ကျွေးလေနဲ့ စာဖတ်ပရိပ်သတ် တို့ရေ။ ပြသနာတွေက ထင်တာထက်ဆိုးနေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ် တို့တတွေလည်း မိမိကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မဲ့သူနဲ့ တွေ့နိုင်ကြစေပြီး မိမိတို့ ဖက်ကလည်း မိမိကို ချစ်တဲ့ လူတဖက်သားကို စွဲစွဲမက်မက် ပြန်ချစ်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲ နိဂုံးချူပ်လိုက် ပါရစေ လားခင်ဗျား။
Labels: ဆောင်းပါး |
ဟုတ်ပါတယ်..... ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒီပိုစ့်ကို ထောက်ခံ အပ်ပါတယ်..... အခုဆိုရင် တော်တော်များများပေါ့လေ... မ်ိန်းကလေးတွေကောပေါ့ ...အွန်လိုင်းမှာ ရည်းစားထားကြတယ်.... ကျွန်တော်ကတော့ ကန့်ကွက်ပါတယ်.... ကိုယ်နဲ့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူး၊ မမြင်ဘူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သိပ်သဘာဝ မကျလှပါဘူး... ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ လေ.... ဒါပေမယ့် ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက်တောင် ရှိလိမ့်မယ် မထင်ဘူး...ဒီ chatting ထိုင်တာတွေဟာ အလုပ်ကိုပါ ထိခိုက်လာပါတယ်။။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက chatting ချည်းပဲ ထိုင်ပြီး အရမရ ၊ အဖတ်မရတွေပြောပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတတ်သူတွေကို ပြောတာပါ... G Talk အပြင် အခြား chat လို့ရတဲ့ site တွေ ရှိပါသေးတယ်.. အဲဒီမှာဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် ဆဲရေးတိုင်းထွာကြတယ်၊ မိန်းကလေးတွေကိုဆိုရင် လိုက်အိပ်မလားလို့၊ မကြားဝံ့မနာသာတွေကို ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ အပြောခံရတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး တွေ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်မလဲ။ အွန်လိုင်းကို အသုံးချတာ လွဲမှားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တကယ်အသုံးမချတတ်ကြသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရှိပါသေးတယ်.... မိန်းကလေးများဟာ တစ်ဖက်ယောက်ျားလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ချောလိုက်တာပေါ့။ မိုက်တယ်ဟ ဆိုပြီး ကြိုက်ကြပါတယ်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ ဓါတ်ပုံဟုတ်၊ မဟုတ် သူမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ထိတောင်လဲဆိုရင် တယ်လီဖုန်းလေးတွေနဲ့ ကျူကြတဲ့အထိ၊ အသံလေးက နားထောက်လို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့။ လူကလည်း မိုက်မှာပဲကွ တို့ ဆိုပြီး ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်ကို ဖြစ်နေကြတာပါ။
ဟုတ်တယ်။ အကိုတို.ပြောတာတော်တော်များများမှန်ပါတယ်.. chatting ကိုအသုံးချပြီး မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ လုပ်နေကြတာ ကိုယ်တွေ.မဟုတ်ပေမဲ. ကြားကြားနေရပါတယ်။ တစ်ချို.ဆိုရင် ၁ လလောက် online မှာစကားပြောဘူးပြှီးတော. ယောက်ကျားလေးဘက်က လွယ်လွယ် အနှစ်မပါတဲ. ချစ်စကားကို မိန်ခလေးတစ်ချို.က အဆင်အခြင်မဲ. အယုံအကြည်လွန်တာတွေအများကြီးပါ ပြီးတော. ပြက်သွားကြတယ် ၂လလောက်တောင်မခံပါဘူးလေ..အစစ်မှမဟုတ်တာ..တာရှည်ဘယ်ခံပါ.မလည်း။ အဲ.ဒါကြောင်. ..online မှာ တွေ.ပြီး ချစ်ကြတဲ.လူတွေကို..သိပ်တော.ဘ၀င်မကြခဲ.ဘူး (အားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး)
ဒါပေမဲ.လည်း ထိုနည်းတူစွာ အလိမ်တွေရှိသလို ဘဲ တစ်ကယ်အချစ်စစ်အချစ်မှန်တွေလည်းရှိမယ်လို. ညီမလေးတော.ထင်တယ်။ အဲ.ဒါကတော. လက်တွေ.ပါ online ပေါ်မှာတွေ.ပြီး ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ. သူငယ်ချင်း၂ယောက် ညီမလေးမှာရှိလာတဲ. အခါ သူတို.ကိုကြည်.ပြီးတော. online ပေါ်ကလူတွေ.တိုင်းတော. မဟုတ်ပါဘူးလေလို.စဉ်းစားမိလာတယ်...သူတို.၂ယောက်က online မှာ တွေ.ပြီး မတူညီတဲ. တံတိုင်းတွေကြားမှာ ချစ်ခဲ.ကြပေမဲ. အခုထိလက်တွဲဆဲပါ။ သူတို.၂ယောက်အချစ်ကနှစ်နဲ.ချီနေပါပြီ။ ညီမလေးအထင်တော. သူတို.လိုလူမျိုးက..၁၀၀၀ မှာ ၂ ယောက်လောက်ဘဲရှိမယ်နဲ.တူတယ်။
ကိုရှမ်းကလေး ရေးတဲ.စာသားလေးတွေက.online ပေါ်ကမိန်းကလေးတွေကို အသိပညာတိုးစေပါတယ်..(သူတို.နာလည်းတက်မယ်ဆိုရင်ပေါ.လေ) ညီမလေးတို. pzj အပါအ၀င်ပေါ.နော်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဂလောက်တောင် လောကကြီးပြောင်းလဲနေသလား အကျင့်စာရိတ္တမသိဘဲ ကိုယ်နဲ့စရိုက် အကြိုက်မတူဘဲ စာဖတ်တာလေးတခုထဲနဲ့ချစ်ကြိုက်တာ တော်တော် သတိထားရမှာဘဲ။ လူချင်းတွေ့ ရင်တောင် အကဲခတ်နိုင်အုန်းမယ် စာရေးတာလေးတခုနဲ့ စိတ်နေသဘောထား ဘယ်လိုသိနိုင်ပါ့မလဲ။
ကဲထားပါ အွန်လိုင်းမှာသိတယ် လူချင်းတွေ့ တယ် မအိပ်နဲ့ လူကိုအရင်လေ့လာအုန်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တဦးက အွန်လိုင်းကနေ အိမ်ထောင်ကျသွားတာပါဘဲ။
ညီ သဘောကျလို့ facebook မှာ တင်လိုက်တယ်နော် အကို ... အဲ့တာကို အကိုလဲ သဘောကျမယ့် လို့ မျှော် လင့်ပါတယ် အကို